Isi okwu ịma aka njem nlegharị anya nke Europe mere ka ọ pụta ìhè na Nzukọ Slovenian
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovenia » Isi okwu ịma aka njem nlegharị anya nke Europe mere ka ọ pụta ìhè na Nzukọ Slovenian
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovenia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Oge erugo ileba anya adịghị ike nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke sitere na mgbasawanye n'ime afọ 50 gara aga wee gbanwee njem nlegharị anya ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke dijitalụ na nke gụnyere.
Bled Strategic Forum bụ ọgbakọ mba ụwa na Centrals na South-Eastern Europe.
Ọrịa COVID-19 ebutela ọtụtụ ajụjụ maka njem nlegharị anya.
Ekwesịrị ịtụgharị uche ọzọ ọrụ njem na ọkwa EU.
Nzukọ Bled Strategic Forum aghọọla ọgbakọ mba ụwa na-eduga na Central na South-Eastern Europe. Mbipụta nke iri nke iri weere ọnọdụ n'August 16 - 31 Septemba n'ụdị ngwakọ. Kọmitii njem nlegharị anya emere na Septemba 2 kpọkọtara ndị ọkachamara sitere na Slovenia na ụlọ ọrụ ama ama, gụnyere EC, UNWTO, WTTC, OECD, ETC, HOTREC, ECM, iji kpaa maka ọdịnihu nke njem nlegharị anya (Europe).
Ndị ọkachamara mba ụwa na ndị Slovenia a ma ama, ndị ọbịa, ndị otu na ndị nnọchi anya njem nlegharị anya nke Slovenia bụ Minista mmepe akụ na ụba na teknụzụ Zdravko Počivalšek, onye isi ụlọ ọrụ maka ahịa nke ime, ụlọ ọrụ, azụmaahịa na SMEs na European Commission Kerstin Jorna, onye isi na Slovenian. Kọmitii Njem Nleta MSc. Maja Pak, onye isi ngalaba mpaghara maka Europe na UNWTO Prọfesọ Alessandra Priante na Director nke National National Tourist Board na Onye isi oche nke European Tourism Commission (ETC) Luis Araújo.
Ọrịa COVID-19 ebutela ọtụtụ ajụjụ maka njem nlegharị anya, n'etiti ndị kacha emetụta ya bụ nlanarị na mgbake, yana mgbanwe nke ụlọ ọrụ ndị njem na-enwe ike na-adịgide adịgide. N'agbanyeghị ọnọdụ siri ike, amụma dị mma nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya mba ụwa na -arị elu. Ndị otu njem nlegharị anya nke afọ a ekwuola ajụjụ bụ ihe ọdịnihu ga -ewetara ndị njem Europe.
Ndị ọnụ na -eru n'okwu kwekọrịtara na ọrịa ọjọọ a enwela nnukwu mmetụta na ụlọ ọrụ njem ma nwee ọtụtụ ihe ịma aka, yana ohere. Oge erugo ileba anya adịghị ike nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke sitere na mgbasawanye n'ime afọ 50 gara aga wee gbanwee njem nlegharị anya ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dijitalụ na nke gụnyere. Nkwubi okwu ndị akọwapụtara na panel ahụ bụ:
Ekwesịrị ka ewughachi ntụkwasị obi ndị njem na njem.
Usoro iwu njem na nkwukọrịta na ịhazi n'etiti mba ndị otu gbasara mmachi njem, nnwale COVID na iwu ichepụ.
Ụzọ okporo ụzọ maka mgbanwe na -adigide dị mkpa.
Achọrọ akara ngosi arụmọrụ ọhụrụ.
Ekwesịrị ịkwado ma kwalite mgbanwe dijitalụ nke ụlọ ọrụ njem.
A na -achọ itinye ego na ntinye ego EU maka nkwado na digitization nke ụlọ ọrụ njem.
Mgbanwe DMO na ọrụ ha iji na -akwado usoro mgbanwe ụlọ ọrụ gaa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yana yana mkpa dijitalụ.